Xaaska Guddoomiyaha Magaaladda Dubia Sheekh Mohammed Bin Rashid oo 31 Milyan la baxsatay (Daawo) – Radio Daljir
Xaaska Guddoomiyaha Magaaladda Dubia Sheekh Mohammed Bin Rashid oo 31 Milyan la baxsatay (Daawo)
Juunyo 30, 2019 4:40 b 0
Gudoomiyaha maamulka magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, ahna madaxweyne kuxigeenka dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayay ka baxsatay xaaskiisii iyadoo ka xaysatay 2 caruur ah iyo lacag dhan 31milyan oo giniga Istraliinka ah.
Amiiradan ayaan la arkin wixii ka danbeeyey bishii febuary ee sanadkan xiligaas oo ay dalka Jarmakal ula baxsatay lacagta 31 ka Milyan ee Gini ah iyo wiil iyo gabadh ay u dhashay duqa Dubai ahna madaxweyne kuxigeenka Imaaraadka oo kala ah wiil lagu magacaabu Sayid oo 7 sano jir ah iyo gabadh lagu magacaabo Al-Jaliia oo 11 sano jirta.
Dalka Jarmalka ayay waydiisatay magangelyo isla xiligii ay tagtay waxaana wararku sheegayaan in isla xiligaasba ay odaygii ay kasoo carartay ka dalbatay furiin.
Arrintaa ayaa muran diblomaasiyadeed ka dhex abuurtay Jarmalka iyo Imaaraadka Carabta, oo uu Sheekhani ka yahay Madaxwayne Xigeen, marka laga soo tago inuu xukunka cimaaradda Dubai.
Imaaraadka ayaa Jarmalka ka dalbaday in loosoo celiyo Amiirada Xaya oo 45 jir ah wiilka Zayid oo 7 sano jira iyo gabadha Jalila oo 11 sano jirta, balse arintaasi oo sharciga Jarlamalka baalmarsan ayaa sababtay in Dawlada Jarmalku diidey dalabka Dubai uga yimi, waxayna Jarmalku ilaalo adag u sameeyeen Amiirad Xaya iyo labadeeda caruur ah oo magangelyo ay siiyeen.
Haweeneydan la yiraahdo Amiirad Xaya ayaa sxbteed u sheegtay in wadanka Jarmalka ay dooratay iyadoo aan aaminayn nidaamka UK oo ay sheegtay inay dib u celin lahaayeen haday iska dhiibto.
Princess Haya ayaa la sheegay inay saaxiibadeed u soo sheegtay inay wadanka Jarmalka ka door bidday aammindarro ay ka qabtay “ nidaamka UK” oo ay sheegtay inay dib ugu celin lahaayeen.
Hoos ka daawo Warbixin an ka diyaarinay.
Maamulka gobalka Banaadir & Saraakisha Amniga oo Muqdisho kulan ku yeeshay
Ra’iisul Wasaare Khayre oo si Heer sare ah loogu soo dhaweeyay deegaanka Huurshe iyo Magaalada Xeraale